Iindawo zokutyela kunye nemivalo yaseMoscow ngoku zifuna ubungqina bokugonywa yi-COVID-19
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseRashiya eziQhekezayo » Iindawo zokutyela kunye nemivalo yaseMoscow ngoku zifuna ubungqina bokugonywa yi-COVID-19
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Culinary • inkcubeko • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Iindaba zaseRashiya eziQhekezayo • Tourism • Intetho yezoKhenketho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Ubungqina bokugonywa kwe-COVID-19 ngoku kuyafuneka ukuba undwendwele iivenkile kunye nemivalo yaseMoscow
Kuphela ngabo banobungqina bokugonywa, ubungqina bokuba banayo i-coronavirus kwezi nyanga zintandathu zidlulileyo, okanye uvavanyo olubi lwe-PCR kwiintsuku ezintathu ezidlulileyo abaya kunikwa isatifikethi sedigital.
Abahlali beSixeko ngoku kufuneka baskene ikhowudi ye-QR ngaphambi kokungena kwiindawo zokubuka iindwendwe.
Ukusukela nge-28 kaJuni, le nkqubo iya kuba "yinto enyanzelekileyo kuzo zonke iivenkile zokutyela kunye neefestile ezifuna ukuqhubeka nokusebenza njengesiqhelo."
Abo banesibetho esinye sokugonya kuya kuthiwa nabo baya kufaneleka phantsi kwesi sikimu.
Izithintelo ezintsha ze-COVID-19 ziyabhengezwa kwikomkhulu laseRussia kwabo bangekayifumani i-coronavirus jab okanye abanayo intsholongwane.
eMoscow USodolophu uSergey Sobyanin ubhengeze umgaqo omtsha ochasene ne-COVID namhlanje oza kufuna ukuba abahlali besixeko bavavanye ikhowudi ye-QR ngaphambi kokungena kwiindawo zokubuka iindwendwe kubandakanya iindawo zokutya, iinkundla zokutya, ii-pubs kunye nezinye iindawo zikawonke-wonke.
Kuphela ngabo banobungqina bokugonywa, ubungqina bokuba banayo i-coronavirus kwezi nyanga zintandathu zidlulileyo, okanye uvavanyo olubi lwe-PCR kwiintsuku ezintathu ezidlulileyo abaya kunikwa isatifikethi sedigital. Abo banesibetho esinye sokugonya kuya kuthiwa nabo baya kufaneleka phantsi kwesi sikimu.
"Imeko yokusasazeka kukaCovid ihleli inzima kakhulu," utshilo usodolophu. “Bangaphezulu kwama-14,000 abantu abagula kakhulu kwizibhedlele. Inkqubo yezempilo ihlanganiswe ngokupheleleyo. ”
Ukusukela nge-28 kaJuni, le nkqubo iya kuba "yinto enyanzelekileyo kuzo zonke iivenkile zokutyela kunye neefestile ezifuna ukuqhubeka nokusebenza njengesiqhelo." Ukutya kokuthatha kunye nokuhambisa kuya kuba kuphela kwendlela enokufunyanwa kwabo bangenayo ikhowudi ye-QR. Izigidi ezibini zabantu kwisixeko esikhulu saseYurophu kuthiwa sele befumene idosi yabo yokuqala.
Isixeko sele sithintele ngokufanelekileyo impilo yasebusuku, ngesibhengezo seeveki ezimbini kwimivalo kunye neeklabhu ezinikezela abaxhasi nge-11 ngokuhlwa.
Kwangelo xesha, umthetho wangaphambili othintela iminyhadala iye yaqiniswa, kuthintela iindawo ekubeni nabathengi abangaphezulu kwama-500 kwisiza nanini na.
Kwiveki ephelileyo, iMoscow yaba sisixeko sokuqala emhlabeni ukwenza ugonyo kunyanzelekile kwabo bakwindima ejongene noluntu. Amashishini kumashishini afana nokubuk 'iindwendwe, ezothutho kunye nokuzonwabisa kuya kufuneka angqine ukuba i-60% yabasebenzi babo bafumene ijab okanye kungenjalo bajongane nezohlwayo. Amagosa aqinisekisile ukuba iinkampani zinokubanqumamisa abasebenzi ngaphandle kwentlawulo ukuze bahlangabezane nezabelo zabo. Imithetho efanayo ibekwe eSt. Petersburg nakweminye imimandla yaseRussia.
Kwangoko namhlanje, igosa eliphethe amalungelo abantu eRashiya, uTatiana Moskalkova ulibize eli nyathelo “njengomdlalo onganyanisekanga.” Uye wathi "iindlela ezenziwa ngayo zibangela ukuba abantu abaninzi basebenze ngengqondo kwaye boyike ukunyanzelwa."